Dhagaxbuur Dagaal Baa ka Dhacay Yaa Kaa Dhagaysan! – Rasaasa News
Dhagaxbuur Dagaal Baa ka Dhacay Yaa Kaa Dhagaysan!
Aug 5, 2010 Dhagaxbuur Dagaal Baa ka Dhacay Yaa Kaa Dhagaysan!, Jwxo-shiil
Magaalada dhagaxbuur waa magaalada labaad ee degaanka Somalida ee si wanaagsan uga faa,iiday dhinacyada horumarka ee ka jira degaanka Somalida.
Magaalada Dhagaxbuur, waxaa taga wadada laamiga ah ee ka baxda Addis Ababa, Jijigana waxaa loo kala socdaa 2 saac oo kaliya. Magaalada waxaa ka jira adeega noocyada isgaadhsiinta oo dhan sida Internetka, telephonada guryaha iyo kuwa gacanta ee mobile-ka loo yaqaan.
Magaalada wax walba oo ka dhaca waxaa lagu ogaan karaa daqiiqad, dadka degan dibadaha ee ka soo jeeda magaalada ayaa si toos ah saacad saacad ula hadla eheladooda degan magaalada Dhagaxbuur.
Waxaan waxba ka jirin oo beenta la dhoobdhoobay ah iskuna maaweelinayaan boggaga janan Jwxo-shiil, ee ah in dagaal ka dhacay, arintaas waa waxba kama jiraan.
Waxaase dhab ah in 2 nin oo Jilibka janan Jwxo-shiil, ahna shacabka magaalada degan ay si beel ahaan loogu sheegay in ay argagixiyaan magaalada. Waxayna xili habeen ah qoryo loo soo qariyey magaalada dhaxdeeda rasaas ku tuureen saldhiga booliska.
Labada nin waa la qabtay dadweynaha magaalada ayaana aqoonsaday, waxayna ahaayeen rag ka mid ah dadka degan magaalada, kolkii la waraystayna waxay sheegeen in arintan ay ka keentay qabiil ahaan ay ku taageerayaan Janan Jwxo-shiil.
Nimankaas waxaa la saaray maxkamad deg deg ah, waxaana lagu xukumay dil, isla maanta ayaana lagu toogtay meel ka baxsan magaalada.
Warraka ay qorayaan boggaga kooxda Janan Jwxo-shiil, waa labada nin ee uu Janan Jwxo-shiil, aduunka dhaafiyey ee maanta lagu toogtay magaalada Dhagaxbuur.
Dhibaatadii haysan jirtay dadweynaha Somalida Ogadeeniya ayaad moodaa in ay maanta ku kaliyeysatay jinfada Janan Jwxo-shiil, oo aan iyagu wali garanin danaysiga shakhsi ee Jwxo-shiil.
Aragtida Dadweynaha Gabalka Mennosota,USA Iyo Madaxweynaha Cusub ee Dawlada Degaanka Somalida Cabdi Maxamuud Cumar
Baadiyow: Dadka Isugu Tagay Shirkii ONLF ee Sweden Waxaa u Badnaa Reer Soomaaliya oo Dano ka Leh Deegaanka Oslo,